Izizathu Ezivamile Zokutholakala Kwenqolobane Yokugcina Imininingwane
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Access Repair Izizathu Ezivamile Zokuthola Inkohlakalo
Izizathu Ezijwayelekile Zenza i-Microsoft Access Database Yonakele noma Yonakele
Kunezizathu eziningi kakhulu ezizodala ukuthi ifayela lakho le-Access MDB lonakaliswe noma lonakaliswe. Sizihlukanisa ngezigaba ezimbili, okungukuthi, izizathu zehardware nezizathu zesoftware.
Noma nini lapho i-Hardware yakho ihluleka ukugcina noma ukudlulisa imininingwane yolwazi lwakho lokuFinyelela, imininingwane ingahle yonakaliswe. Kunezinhlobo ezintathu ikakhulukazi:
Ukwehluleka Kwedivayisi Yokugcina Idatha. Isibonelo, uma i-hard disk yakho inemikhakha ethile emibi nefayela lakho le-Access MDB ligcinwa kule mikhakha. Ngemuva kwalokho ungafunda ingxenye kuphela yefayela le-MDB. Noma idatha oyifundayo ayilungile futhi igcwele amaphutha.
Idivayisi Yokuxhumana Enamaphutha. Isibonelo, i-Access database ihlala kuseva, bese uzama ukuyithola kusuka kwikhompyutha yeklayenti, ngezixhumanisi zenethiwekhi. Uma amakhadi esibonakalayo senethiwekhi, cabama-les, ama-routers, ama-hubs kanye namanye amadivayisi akha izixhumanisi zenethiwekhi anezinkinga, khona-ke ukufinyelela okukude kwedatha ye-MDB kungayenza yonakele.
Ukwehluleka kwamandla. Uma ukwehluleka kwamandla kwenzeka lapho ufinyelela kulwazi lwe-MDB, lokho kungashiya amafayela akho e-MDB elimele.
Kunamasu amaningi wokuvimbela noma ukunciphisa inkohlakalo yedatha yokuFinyelela ngenxa yezinkinga zehadiwe, ngokwesibonelo, i-UPS inganciphisa izinkinga zokwehluleka kwamandla, futhi ukusebenzisa amadivayisi wehadiwe anokwethenjelwa kunganciphisa namathuba okonakala kwedatha.
Futhi ukonakala okuningi kwe-Access database kwenzeka ngenxa yezinkinga ezihlobene nesoftware.
Ukubuyiselwa kohlelo lwefayela okungalungile. Ungakuthola kungakholeki ukuthi ukutakula uhlelo lwefayela kungadala ukonakala kwe-Access database. Kepha empeleni, kwesinye isikhathi lapho uhlelo lwakho lwefayela luphukile, bese uzama ukuqasha ithuluzi lokuthola idatha noma uchwepheshe ukuthola amafayela we-MDB akulo, amafayela atholakele kungenzeka asenenkohlakalo, ngoba:
Ngenxa yenhlekelele yohlelo lwefayela, ezinye izingxenye zefayela ledatha lasekuqaleni le-MDB ziyi-lost unomphela, noma ubhalwe phansi idatha kadoti, okwenza ifayili lokugcina elisindisiwe le-MDB lingaphelele noma liqukethe idatha engalungile.
Ithuluzi lokutakula noma uchwepheshe akanabo ubuchwepheshe obenele ukuthi aqoqe idatha kadoti futhi ayigcine njengefayela elinesandiso se-.MDB. Njengoba lawa mafayili okuthiwa yi-.MDB engenayo imininingwane evumelekile yolwazi lwe-Access, awasizi ngalutho.
Ithuluzi lokutakula noma uchwepheshe uqoqe amabhulokhi wedatha afanele wefayela le-MDB, kepha akawahlanganisanga ngokulandelana okulungile, okwenza nefayela lokugcina elisindisiwe le-MDB lingasebenziseki.
Ngakho-ke, lapho kwenzeka inhlekelele yohlelo lwefayela, kufanele uthole ithuluzi / uchwepheshe omuhle wokutakula idatha ukuthola amafayela wakho wedatha ye-MDB. Ithuluzi / uchwepheshe omubi uzokwenza isimo sibe nzima kunokuthi sibe ngcono.
Igciwane noma enye i-Software enobungozi. Amagciwane amaningi, njengeTrojan.Win32.Cryzip.a, izothelela futhi ilimaze amafayela we-Access MDB noma iwenze angatholakali. Kunconywa kakhulu ukufaka isoftware yekhwalithi elwa negciwane kuhlelo lwakho lwemininingwane.
Bhala i-Operation Khipha. Esimweni esijwayelekile, kufanele uyeke ukungena ngomusa ngokusindisa lonke ushintsho lwakho ku-database ye-MDB bese uchofoza ku- "Phuma" noma ku- "Vala" into yemenyu. Kodwa-ke, uma i-Access ivaliwe ngokungajwayelekile lapho uvula futhi ubhalela i-database ye-MDB, injini ye-Jet database ingamaka i-database njengomsolwa noma yonakele. Lokhu kungenzeka uma ukwehluleka kwamandla okukhulunywe ngenhla kwenzeka, noma uma uyeka Ukufinyelela ngokuchofoza u- “Qeda Umsebenzi” ku-Windows Task Manager, noma uma ucisha ikhompyutha ngaphandle kokuyeka i-Access ne-Windows ngokujwayelekile.
Izimpawu Zolwazi Lokufinyelela Olukhohlakele:
Ukuze uthole inkomba yakho, siqoqe uhlu lwamaphutha lapho ufinyelela ifayela le-MDB elonakele.
Lungisa imininingwane yokuFinyelela eyonakele:
Ungasebenzisa umkhiqizo wethu wokuwina imiklomelo DataNumen Access Repair kuya thola imininingwane yakho yokufinyelela ekhohlakele.
I-FAQ Ye-Microsoft Access MDB eyonakele